लेख्न नभ्याएको एउटा समीक्षा: समयस्ट्रोक्सको - Naya Online
लेख्न नभ्याएको एउटा समीक्षा: समयस्ट्रोक्सको
सोमवार, बैशाख १८, २०७४ (May 1st, 2017 at 9:25am ) साहित्य
मैले बुझेका रवि रोदन
कवितालाई बुझेर लेख्ने, बिचार र शिल्पको सुन्दर संयोजनमा विश्वास राख्ने, शब्दहरूको प्रयोगमा कञ्जुस्याइ गर्दै कालजयी कविता कोर्ने कविको नाम नै रवि रोदन हो ।
‘समयस्ट्रोक्स’ हात पार्नअघि नै मैले कवि रवि रोदनको बारेमा बनाएको धारणा थियो त्यो । एउटा कविलाई बुझ्न उनका धेरै कविताहरू पढिराख्न आवश्यक छैन, लाग्छ । रोदनको समयस्ट्रोक्स पूरै पढेँ त्यसमा सङ्ग्रिहित जम्मै पैँतालीस कविता पढेँ तर मैले आफ्नो ‘रेडिमेड’ धारणालाई परिवर्तन गर्न चाहिनँ ।
नेपाली साहित्यानुरागीहरूले त्यस्ता धेरै नामहरू पढेका छन् जो नेपालको सिमानाबाहिरबाट आएका हुन् । जस्तो प्रकाश कोवित, युधिर थापा, इन्द्रबहादुर राई, लीलबहादुर क्षेत्री, मनप्रसाद सुब्बा, विन्ध्या सुब्बा, मनोज बोगटी, राज पुनियानी आदि । यीमध्ये केहीले नेपाली भूमिमा रहेका नेपाली पाठकहरूलाई सिक्किम, कालेबुङ्, दार्जिलिङ्ग सबैतिर मज्जाले घुमाउन सफल भएका छन् । नेपालबाहिरका भएर पनि विदेशी नलाग्ने यी कलमजीवीहरू आफूले बाँचेको समाजका कुरा शब्दमा उनेर हामीलाई बाँढ्छन् । यदि हामीबीच साँस्कृतिक नाता वास्तवमै प्रगाढ छ भन्न सकिन्छ भने त्यसको श्रेय प्रथमतः लेखनलाई नै जान्छ ।
यता, लिम्बू इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङ्ग सिक्किममै जन्मेका हुन् । वैरागी काइँला, ईश्वर वल्लभ र इन्द्रबहादुर राईले ल्याएको तेस्रो आयामको इतिहास पनि दार्जिलिङबाटै सुरु हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा, इण्डियाका विभिन्न भूभागमा नेपाली भाषी र नेपाली साहित्यमा कलम चलाउने नेपालीहरू बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहन्छ । नेपाली साहित्यको समालोचना–लेखन, जुन नेपालमा लेखिन्छ, मा नेपालबाहिरका त्यस्ता धेरै उल्लेखनीय नामहरू छुट्ने गरेको भए पनि हामीले तिनको नाम मुक्तकण्ठले लिनै पर्छ । तिनको नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान स्वीकार्नै पर्छ । नेपालबाहिरको त्यही मलिलो माटोमा जन्मेका एक कलाप्रेमी, कविताकर्ममा साधनारत कविको नाम नै रवि रोदन हो ।
उपल्लो भूगोलमा नेपाली नश्ल र मन लिएर जन्मिएका कविका कविता हामी आम नेपालीका लागि रुचिका विषय हुनै पर्छ । त्यसैले कवि रोदनका कविताको पठन हैन, अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । हामी सबैले लेख्ने भाषा एउटै भए पनि हाम्रो चिन्तन, सिद्धान्त र विषयवस्तुहरू फरक हुन सक्छन् । फरक परिवेशमा बसेर लेखिएका कविताहरूको अध्ययन गर्न पाउनु हाम्रो लागि अहोभाग्यको कुरा हो । त्यसैले उनका कविताहरूलाई विश्वकविताको स्थानमा राखेर समेत पठन आवश्यक छ । अङ्ग्रेजी या अन्य भाषाको साहित्यलाई मात्रै विश्वसाहित्यको स्थानमा राखेर अध्ययन गर्नु कति पनि तर्कसङ्गत देखिँदैन ।
“…. मान्छेले मान्छेकै अनुहार
मान्छेलाई निर्वासित पारेको
घर–घरमा झुण्डिएको छ
बुद्ध हाँसिरहेको हुन्छ ।
हरिमाया दर्जीकै सियोले सिएको
सुकिलो लुगा लगाउँछ हर्कमान बाहुन
झिल्केले अर्जापेको खुकुरी
कम्मरमा भिर्छन् हर्कमान अधिकारी
सन्तवीरले सिलाएको जुत्ता लाएर
भूइँ टेक्छन् हर्कमान तामाङ ।
मालिक भएर हिँडेपछि
जदौ जदौ भन्नु पर्ने हुन्छ … ।”
– (निर्वासित मान्छे)
नेपालबाहिर बसेर लेख्ने लेखक, कविहरूको कृति पढ्दा मुख्यतः तिनले उठाउने विषयवस्तु, तिनको लेखन शैली, तिनका सृजनामा पाइँने कालजयीता, समसामयिकता हामी सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । भनेँ, यतिखेर मेरो हातमा छ नेपाली मूलका भारतीय कवि रवि रोदनको ‘समयस्ट्रोक्स’ । र, म छु समयमा लेख्न नभ्याएका शब्दहरूसित ।
समयस्ट्रोक्सभित्रको उपर्युक्त कवितांशबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालमा बस्ने नेपालीहरूको सृजना र भारतमा बस्ने नेपाली मूलका सर्जकहरूको सृजनामा खासै अन्तर छैन । उनीहरू पनि हामीले जस्तै जातीय विभेद, छुवाछूतविरुद्धको आवाज उठाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा ‘निर्वासित मान्छे’ले प्रष्ट पारिसकेको छ । यो विषयलाई नेपालमा जतिकै प्रखर रुपमा उठाउनु पर्ने वाध्यता रहेछ त्यहाँ पनि । समयस्ट्रोक्सभित्र हाम्रै सृजनामा पाइने खालका अभाव र पीडाका स्वरहरू छन्् । मक्किएको चप्पल, फुटेको कुर्कुचामै अल्झिएको रहेछ त्यहाँको लेखन पनि— भन्ने कुरा समयस्ट्रोक्सले देखाउँछ । कहिलेसम्म टिप्ने गरिबीका विम्वहरू ? मालिक र खेतबारीको कुरा, श्रमको बखानमै सीमित रहेछ अहिलेसम्म हाम्रो लेखन । कलम चलाउने आम कविहरूले गरिब, निरीहहरूकै पक्षमा वकालत गरेको सुन्छौँ, पढ्छौँ । रवि रोदनका कवितामा त्यस्ता स्वरहरू चर्काचर्का लाग्छन् । गरिब किसानको पक्षमा लेखिँदोरहेछ कविता त्यहाँ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताहरूबीच समानता खोज्नु नेपाली र नेपाली मूलका भारतीय कविहरूको साझा मुद्दा रहेछ । देशमा विकाशले गति लिन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने बानी रहेछ त्यहाँ पनि । अँश्रु ग्याँस र लाठीचार्जकै कुराहरू हुँदा रहेछन् कविताहरूमा । यहाँ जस्तै त्यहाँ पनि पहिचानका मुद्दाहरू उठाइँदो रहेछ । भारतभूमिमा नेपाली पहिचान माँगिदोरहेछ । आदिवासी सपनाहरूकै खात ओढेर दिदाउँदारहेछन् त्यहाँका मान्छे पनि । समयस्ट्रोक्सभित्रका कविताहरूले त्यही भन्छ । अझ, त्यहाँ उल्लिखित हर्कमान, हरिमाया, सन्तवीरहरू नेपालका बासिन्दा हुन् कि उत्तैका छुट्याउन निक्कै मुस्किल हुन्छ । ती सबै पात्रहरू आत्मीय लाग्छन्, छिमेकी लाग्छन् । जेभएपनि हामी सबैको एउटै मूल विषय भनेको जीवनको लयमा कविता लेख्नु रहेछ ।
वस्तुतः कवि रवि रोदनका कविताहरू त्यति सजिला छैनन् । जति सरल देखिन्छन् त्यति नै गहिरा छन् । उनका कविताहरू वस्तुतः अमूर्त चित्रकलाझैँ लाग्छन् । शायद उनी स्वयम् चित्रकार भएर हुनसक्छ त्यो । हुन पनि यस्तै कविताहरूको खाँचो छ सहरमा, लाग्छ । किनभने यो सहरमा धेरै कवि कवितै लेख्दैनन् । रोदनका कविता सरल लाग्छन् तर दोहो¥याएर पढ्नु पर्छ । उनी कवितामार्पmत के भन्न चाहन्छन् त्यो पत्ता लगाउन एकछिन अडिएर सोच्नै पर्छ । त्यसरी अडिएर सोच्दा कविताले भन्न खोजेको कुरा पाठकको मनमा बोध भएर आउनुचाहिँ पर्छ । रोदनका कतिपय कविता पढ्दा झनै अमूर्त लाग्छन् । यसतर्फ भने कविले सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । कतिपय कविताहरू बिनानिचोर अन्त भएका हुन् कि ? ‘कोहेजन’मा अझै ध्यान दिनसकेको भए समयस्ट्रोक्सले झनै पाठकको मन जित्न सफल हुन्थ्यो ।
आरोहण प्रकाशनबाट सन् २०१५ मा प्रकाशित कवि रवि रोदनको कविताकृति ‘समयस्ट्रोक्स’भित्र पैतालीस कविताहरू समेटिएका छन् । कवि स्वयम्को आवरण चित्रमा सज्जिएको आकर्षक कृति समय स्ट्रोक्समा कवि मनोज बोगटीले सङ्ग्रहित कविताहरूलाई जिम्मेवार कविताको संज्ञा दिँदै सारगर्भित भूमिका लेखेका छन् । यसमा समाविष्ट कविताहरूकोे स्केच समेत कोरिएकोले सुनमा सुगन्ध थपेको महसुस हुन्छ ।
समग्रमा समयस्ट्रोक्स एक सङ्ग्रहणीय कृति हो ।
१६ फेब्रुअरी, २०१७, केएसए